Dowladda Soomaaliya oo qorsheyneysa soo saarista lacago cusub | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo qorsheyneysa soo saarista lacago cusub
Dowladda Soomaaliya oo qorsheyneysa soo saarista lacago cusub
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudan Xasan Cali khayre ayaa kormeer shaqo ku tagay Bankiga dhexe ee Soomaaliya iyo Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta si uu hubiyo qaabka ay ugu adeegaan bulshadda.
Mudane Xasan Cali Khayre Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maamulka Bankiga dhexe ee Soomaaliya kala hadlay soo saarista lacag cusub oo dalku yeesho , tayeynta shillinka Soomaaliga iyo qaabka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo dhibaatadda dhaqaale ee ka dhalan karta adeegsiga lacagaha been abuurka ah ah.
Sidoo kale intii uu kormeerkiisa ku jiray Ra’iisul Wasaaraha wuxuu tagay Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta halkaasi oo warbixin kaga dhageystay mas’uuliyiinta wasaaradda taasi oo ku saabsan sida ay u socdaan howlaha wasaaradda.
Dhinaca kale Ra’iisul Xasan Cali Khayre ayaa qeyb kamid ah waqtiisa shaqadda siiyey in uu muwadininta Sooomaaliyeed uga jawaabo talooyin iyo tusaalooyin ay ku soo diren Email loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed ay ugu soo diraan talooyinkooda.
Mudane Xasan Cali khayre ayaa dadkii u soo diray fariimaha si caadi ah ugu jawaabayey isla markaana u sheegayey in Dowladdu ay ku shaqaynayso Aragtidooda wanaagsan.
Previous articleWasaaradda Dastuurka oo kulan wadatashi ah la yeelatay Aqoonyahanada Soomaaliyeed
Next articleDhallinyaro la baray xirfado ay ku shaqeystaan